အမျိုးသမီးများအတွက် Luxury Platform Chunky ချယ်လ်ဆီးခြေကျင်းဖိနပ် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းဝယ်ပါ WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက်ဇိမ်ခံ Platform Chunky ချယ်လ်ဆီးရှူးဖိနပ်
အရောင် 812black 811black 811plushblack 812plushblack
ဖိနပ်ဆိုဒ် 40 39 38 37 36 35
အမျိုးသမီးများအတွက်ဇိမ်ခံချည်နှောင်နိုင်သောချယ်လ်ဆီးချယ်လ်ကြိုး - 812black / 40 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Insole ပစ္စည်း: Plush
ပိတ်အမျိုးအစား: elastic band
Boots ကိုကူညီပါ N ကိုအမြင့်: Tube ၌တည်၏
တစ် ဦး တည်းသော: ရော်ဘာ
Bootleg မျက်နှာပြင်ပစ္စည်း: PU
Flat-Bottomed - စတိုင်ပုံစံ၏အဆုံးနှင့်အတူ
Vamp နံရံပစ္စည်း: ကွက်
ကောင်းပြီ၊ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားခြင်းနှင့်စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ထိပ်ဆုံးမှသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ကော်သည်မြင်နိုင်ပြီးရော်ဘာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အနုတ်လက္ခဏာမှာတစ် ဦး တည်းသောအညစ်အကြေးသည်ပိတ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့သည်လျှောမကျ၊ , သို့သော်စနီကာများကဲ့သို့ရာဘာ၏အသံသည်အသားအရေသည်ပုံမှန်ပျော့ပျောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၃၈-၃၉ ထက် ၂ အရွယ်ပိုကြီးသည်။ ခြေအိတ်တစ်ချောင်းနှင့်အနည်းငယ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်ထားသည်။ သို့သော်သယ်ဆောင်သည်၊ Grumpy နေရာများတွင်လမ်းလျှောက်ရန် Galamanhes ကို Maman ခေါ်သည်။ Fix Price မှအလွန်ကောင်းမွန်သောသင့်လျော်သောနွေးထွေးသောအူတိုင်များသည်ဖိနပ်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုပုံမှန်မဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်လက်၏ခါးဆစ်များကြောင့် pupyrka၊ ထိခိုက်မှုမရှိသောချို့ယွင်းချက်များဖြစ်သည်။ .‍♀ & Middot;
မယုံနိုင်စရာဘွတ်ဖိနပ်၊ ကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ပလတ်စတစ်အနံ့အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာအရွယ်အစား ၃၈ ရှိတယ်၊ အရွယ်အစား ၄၀ ကိုတောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်အရွယ်အစားနှစ်ခုကြားခြားနားချက် ၁ စင်တီမီတာသာရှိတယ်၊ ငါမှန်ပါတယ်၊ သူတို့ကငါ့အတွက်နည်းနည်းလေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ပိုထူတဲ့ခြေအိတ်နဲ့ ကောင်းတယ် ငါ၏အဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အတူမွေ့လျော်!
အမိန့် ၂၅.၁၁ ကိုမော်စကိုသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ၁၃.၁၂ ။ ကျွန်တော့် ၃၈ အတွက်အရွယ်အစား ၄၀ ကိုအမှာလိုက်တယ်။ သူတို့ကနည်းနည်းလေးမြည်းတယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်မကောင်းဘူး။ အရိုးအထူးကုအရိုးတစ်ချောင်းကိုတင်လိုက်ပြီးအားလုံးက OK ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာနွေးနေတဲ့ခြေအိတ်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ကော်ဘယ်နေရာကိုမှမမြင်နိုင်ဘူး၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောဘွတ်ဖိနပ်၊ ကျွန်တော်ဒီလိုဈေးနှုန်းကိုကြိုက်တယ် ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ!
ဖိနပ်တွေကလှတယ်။ ငါကနောက်ထပ်အရွယ်အစားတစ်ခုထပ်မှာရန်မှာကြားလိုပါတယ်၊ ၃၈ ကိုသုံးလေ့ရှိပြီး ၃၉ ကိုအမှာထားပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဖက်စလုံးကို ၀ တ်ဆင်ရုံသာမကကုန်ကျစရိတ်များကိုပါထည့်သွင်းထားတာကြောင့်သာလွန်ပါတယ်။ သူတို့ကတော်တော်လေးအနံ့ဆိုးနဲ့ရောက်လာတာပါ။ အကောင်းဆုံး သူတို့အဆင်ပြေပါတယ်! ၀ ယ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။